ary ho afaka hihodina hatrany ny toekarena, hoy i Hery Rajaonarimampianina. Tetikasan’ny filoham-pirenena io ary tsy maintsy hotanterahintsika. Tiako anefa ny manafatra fa tsy vita indray andro ny tetikasa, hoy izy. Olana eran-tany io angovo io, fa ny tenako kosa dia mampanantena anareo fa hovahantsika izany. Miezaka mifampiraharaha amin’ny mpampiasa vola tsy miankina any ivelany aho, ary efa manomboka mody ventiny ny rano nantsakaina, hoy ny fampandriana adrisa sy ny fampanantenana. Ny ankamaroan’ireo tetikasa dia hiantohan’ny volantsika madiodio hatramin’ny 80%. Mila ny fiaraha-miasan’ny sehatra tsy miankiana sy ny fanjakana na 3P anefa isika. Tena tsy mety miova i Hery Rajaonarimampianina amin’ity miteniteny foana mampanantena poak’aty ity. Akaiky tokoa ny fifidianana, ka mandeha indray ny abobo sy ny arira, izay efa zary fihomehezana ho an’ny mpanara-baovao sisa. Niarahan’ny rehetra naheno ny hoe 3 volana dia hovahako ny delestazy tamin’ny 2013 saingy inona no vita teo ? Izao indray dia ny handrakotra herinaratra an’i Madagasikara. Ny an-tratra tsy lavo dia antsoy ihany koa raiben’ialahy, hoy ny fitenenana, ka izay mihitsy no ataony sy ambarany satria ny 15% aza no misitraka herinaratra eto Madagasikara, kanefa io iaraha-mahita io ny tsy fahitany vahaolana. Fahoriana hatrany no iainan’ny valalabemandry ary io iaraha-mahita io indray ny fiakarana 7,5 ka hatramin’ny 15% ny eo amin’ny saran’ny herinaratra, izay hisy fiantraikany amin’ny vidim-piainana.